India mamorona fiaramanidina fiaramanidina mahomby hamelomana ny tsara lehibe kokoa
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » India mamorona fiaramanidina fiaramanidina mahomby hamelomana ny tsara lehibe kokoa
Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana India • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Indostrian'ny drone India
Andriamatoa Jyotiraditya Scindia, minisitry ny fiaramanidina sivily India, dia nilaza fa niova ny andraikitry ny governemanta teo ambany fitarihan'ny praiminisitra Narendra Modi, ary miasa ho mpampita vaovao, fa tsy mpanara-dalàna, mijery fomba fiasa vaovao mifototra amin'ny porofo. fanaovana politika ho an'ny drôna.
Ny haitao drone dia hitondra ireo miaina amin'ny sisin'ny fampandrosoana.
Misy ny drafitra hampiasana drôna hametahana tanàna kely an'arivony izay hanomezana vahana ny indostrian'ny drôna any India.
Amin'ny fampiasana amin'izao fotoana izao, ny drôna dia mety hahomby amin'ny fanomezana vaksiny, izay miteraka fitomboan'ny fiara fanaovana vaksiny.
Nandritra ny fotoam-pivoriana tamin'ny "Drones ho an'ny tombontsoam-bahoaka - programa fanentanana ho an'ny besinimaro", izay iarahan'ny federasiona Indiana Chambers of Commerce and Indostria (FICCI) sy ireo andrim-panjakana momba ny famatsiam-bola (DFI) miaraka amin'ny World Economic Forum, hoy Andriamatoa Scindia dia nilaza ny teknolojia zava-dehibe ny fampiroboroboana ary teknolojia drôna hitondra ireo mivelona amin'ny sisin-tany ho amin'ny fampandrosoana. "Manana andraikitra lehibe amin'ny fampifandraisana ny olona amin'ny halavan'ny firenena ny Drôna," hoy izy.
India amin'ny maha firenena azy, hoy Andriamatoa Scindia, dia efa mpanaraka ny fivoaran'ny zava-baovao na ny haitao. Sambany izahay mijery ny ho mpitondra, hoy ny minisitry ny fiaramanidina sivily.
Ny fitsipi-drôna vaovao, miaraka amin'ny fotoana fohy miaraka amin'ny tetika famporisihana mifandraika amin'ny famokarana (PLI) ho an'ny drôna, dia manome tosika lehibe ny indostrian'ny famokarana an-trano. "Ny ambaratonga fampitomboana sanda 40 isan-jato ho an'ny sehatra dia manome tombony miavaka hivoahana amin'ny fanombohana manidina," hoy Andriamatoa Scindia.
Nilaza koa izy fa raha te hahomby ny teknolojia rehetra dia mitaky dingana 3 - firafitry ny politika, famporisihana ara-bola ary firafitry ny fangatahana. Ny governemanta indianina, hoy hatrany izy, eo ambanin'ny fanadihadiana ny vohitra sy ny sarintany miaraka amin'ny teknolojia an-tsekoly any amin'ny faritra vohitra (SVAMITVA) dia mikasa ny hampiasa drôna hametahana tanàna kely an'arivony izay omeo tosika lehibe ny indostrian'ny drôna India.
India dia manana faritany somary sarotra tratrarina, ary ny drôna dia mety hahomby amin'ny fanomezana vaksininy, ka mitombo ny fiakaran'ny vaksiny, hoy ny minisitra. "Ny governemanta dia efa miasa ho mpanjifa vatofantsika amin'ny alàlan'ny fampiasana vaksininy sy amin'ny fanaovana sarintany ary famoronana rafitra fitakiana ny teknolojia drone any India," hoy Andriamatoa Scindia. Nanaiky ny drafitra PLI ho an'ny indostrian'ny drone ny governemanta, hitondra famatsiam-bola vaovao ary hampiroborobo ny asa any India, hoy ny minisitra. Nilaza izy fa efa eo am-pandosirana ny teknolojia drone ary nanentana ireo vondron'orinasa mba hanampy ny teknolojia hivoaka.
Andriamatoa Rajan Luthra, filohan'ny komity FICCI momba ny Drones sy ny birao filoham-pirenena - Lehiben'ny tetik'asa manokana, Reliance Industries, Ltd., dia nilaza fa ny fambolena dia iray amin'ireo sehatra manandanja indrindra ao India izay mety manana tsena lehibe sy mampiasa drôna ho an'ny fambolena. hitondra tombony lehibe ho an'ny tantsaha sy ny sarambabem-bahoaka.
Andriamatoa Vignesh Santhanam, Aerospace and Drones, World Economic Forum, dia nilaza fa ny drôna dia tokony hanamafy ny rafi-pikarohana agri hanohanana ity sehatra ity amin'ny alàlan'ny vokatra mihamitombo sy ny fampitomboana ny mponina any ambanivohitra ho amin'ny fivelomana azo antoka ary trano fanaovan-jiro ho an'ny teknolojia IR fahefatra.
Andriamatoa Smit Shah, talen'ny fiaraha-miasa, DFI, dia nilaza fa, "Miarahaba ny ezaky ny minisitra amin'ny maha mpiara-miasa amin'ity indostria ity izahay."